चिनियाँ सरकारद्वारा नेपालको राजसस्थाको उच्च प्रसंशा, चिनियाँ राष्ट्रपति र पूर्वराजा बीच निर्णायक भेटवार्ता हुने! – ZoomNP
चिनियाँ सरकारद्वारा नेपालको राजसस्थाको उच्च प्रसंशा, चिनियाँ राष्ट्रपति र पूर्वराजा बीच निर्णायक भेटवार्ता हुने! प्रकाशित मिति: बिहिवार, मंसिर ०९, २०७३ समय - ०:४६:१९ काठमाडौं, ८ मंसिर । गत साता बेइजिङ पुग्नुभएका पूर्व श्री ५ महाराजाधिराज ज्ञानेन्द्र शाह चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङसँगको भेटवार्तापश्चात् मात्र स्वदेश फर्कने हुनुभएको समाचार प्राप्त भएको छ । सम्बद्ध स्रोतका अनुसार बेइजिङमा उहाँसँग सी जिनपिङनिकटका उच्चाधिकारी तथा नेताहरूसँग छलफल चलिरहेको बुझिएको छ । छलफलका क्रममा चिनियाँ उच्चाधिकारीहरूले राजाको समयमा नेपालको परराष्ट्रनीति परिपक्व रहेको भन्दै प्रशंसा गरेका थिए ।